Xakamaynta xayawaanka, isticmaalka Habaynta
Baahiyaha ayaa keena dhibaatooyin badan oo loo qabo bannaanka iyo bannaanka, gaar ahaan haddii aynaan si joogto ah u cageyn. Haddii goobtaada ama qeyb ka mid ah dhulalka ay ku baxaan haramaha, ka dibna ma sameyn kartid kiimiko la'aan. Su'aasha ayaa soo baxaysa: sida loo daweeyo beerta cawska? Waxaa jira walxo kiimiko ah oo badan oo ah cawska iyo cawska.
Herbicide "Ground": baaxadda, farsameynta ficilka, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka daroogada
Xakamaynta geedi-socodka waa nidaam sannadle ah oo aan fiicnayn oo loogu talagalay degganaha xagaaga. Waajibaadkan waxaa ku xeel dheer koritaanka degdegga ah ee haramaha. Waxay u egtahay in uun kaliya laga nadiifiyey aagga, iyo cawska ayaa horeyba u soo baxday. Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan suurtagal ahayn in laga saaro: Cawska cawska ayaa qaadaya dhammaan walxaha waxtar leh iyo walxaha ka soo baxa ciidda, laga reebo dhirta kobcaya.
Tilmaamaha loo isticmaalo isticmaalka geedaha "Titus"
Sannad kasta marka la yimaado xilliga beerto, mowduucyada herbicides mar kale iyo mar kale waxay kasbadaan mudnaanta. Xakamaynta ciriiriga oo guul leh waa ballanqaad tayo badan oo tayo wanaagsan leh. Maqaalkani waxaan eegeynaa sifooyinka waxtarka leh ee soo-saarka xun ee "Titus", baaxadda codsiga, tilmaamaha lagu diyaarinayo isku-dhafka shaqada, iyo tallaabooyinka badbaadada inta lagu jiro hawlgalka.
"Lontrel-300": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Xakamaynta geedaha waa geedi socod aad u muhiim ah oo adag. Tayada iyo tirada dalagga waxay ku xiran tahay guusha. Qodobkani waxa aanu tixgelin doonaa mid ka mid ah daroogada ugu waxtarka leh ee burburinta cawska - geedka "Lontrel" iyo tilmaamaha isticmaalka. Herbicide "Lontrel-300": maaddooyinka firfircoon iyo foomka sii deynta Qaybaha firfircoon ee geedaha "Lontrel 300" waa clopyralid.
Sida loo isticmaalo "Agrokiller" si aad uga takhalusto cawska
Xakamaynta joogtada ah ee xayawaanku waxay bixisaa degganayaasha xagaaga kasta. Waad la dagaalami kartaa cayayaanka gacantaada, waqtiga oo dhan iyo tamartaada oo dhan. Laakiin sayniska casriga ahi wuxuu kobciyaa oo gacan ka geystaa fududeynta hawshan. Sidaa darteed, herbicides ayaa la abuuray in burburiyo dhir aan loo baahnayn. Qeexida daroogada Herbicide "Agrokiller" - daroogo loogu talagalay burburinta firileyda iyo cawska digaaga ah, iyo sidoo kale geedo iyo geedo qoryo ah inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Sida loo isticmaalo dhirta "Zenkor" si loola dagaallamo cayayaanka xun
Sannad kasta, bannaanka iyo beeraha waxaa lagu soo koobay xaqiiqda, in meelaha aan ka ahayn dalagga beeray, iyaga oo dhan noocyada cawska waxay bilaabaan inay koraan, qaadashada nafaqooyinka dhirta laga beero. Xakamaynta cawska, geedaha bakteeriyada ayaa la abuuray, mid ka mid ah - daroogada "Zenkor" - ayaa looga doodi doonaa maqaalkan.
Sida loo codsado "Stomp" ee loo yaqaan 'herbicide' ee la dagaallanka cayayaanka
Iyadoo aan lahayn herbicides, way adag tahay in la qiyaaso hawlaha beeraha casriga ah. Waxaa loo isticmaalaa in la burburiyo haramaha. Mid ka mid ah, iyaga oo caan ku ah beeralayda, waa daroogada "Stomp" - firfircooni waxtar leh oo burburiya cawska dicotyledonous iyo badarka dalagyada dalagyada dalagyo badan oo ganacsi.
Herbicide "Prima" - waa habab caan ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay ilaalinta dalagyada laga soo qaato 160 nooc oo ah cawska sanadlaha ah iyo labo sano ee qoyska Dicots. Waxaa loo isticmaalaa dalagyadaas: sarreen, galley, shaciir, masago, masaggo, hadhuudh. Foomka fasax iyo sharaxaad ka mid ah geedka xakamaynta Waxaa lagu heli karaa qaab ah emulsion concentrate emulsion ee weelasha 5 litir.
Corn waa mid caan ah oo la raadsado ka dib markii beeralayda guriga. Arrin muhiim ah oo ku jirta beeraheeda ayaa ka ilaalinaysa khashinka dalagyada. Jawaabta tan waxaa loo qaadan karaa isticmaalka herbicides. Xeerarka aasaasiga ah ee beerashada gallayda Galley ah kobaca wanaagsan ayaa u baahan shuruudaha soo socda: heerkulka 12-25 ° C; qoyaanka hawada aan ka yarayn 30%; ciidda pH 5.
Herbicide "Tornado": sida loo isticmaalo qalabka xakamaynta cawska
Bannaanka kasta oo bannaanka iyo beerta si taxadar leh ula tacaalaya haramaha. Nidaamkani wuxuu qaadaa waqti badan iyo dadaal. Laakiin maanta, marar badan, diyaargarow gaar ah ayaa loo isticmaalaa caws, kaas oo ka dhigaya suurtogalnimada in si dhakhso ah oo wax ku ool ah looga nadiifiyo aagga geedo badan. Mid ka mid ah habka wax ku oolka ah ee dagaalkan waa daroogada "Tornado".
Herbicide "Fabian": sharaxaad, habka isticmaalka, heerka sicirka
Kiimikooyin kala duwan ayaa loo adeegsadaa si loo ilaaliyo dalagyada digaaga ee haramaha. Mid ka mid ah kuwa si weyn loo isticmaalo waa "herbicide" ah "Fabian". Waxaan ku talineynaa in lagu ogaado sharaxaadiisa si faahfaahsan, si loo baro mabaadii'da ficilka iyo waxtarka. Qeybaha firfircoon iyo foomka sii deynta Daroogada waxaa lagu soo bandhigaa qaabka granules ku kala firdhiyey biyaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Herbicides 2020